Manchester City oo ugu dambeyn ku soo laabatay wadada guusha, kadib markii ay ka adkaatay Crystal Palace… + SAWIRRO – Gool FM
Manchester City oo ugu dambeyn ku soo laabatay wadada guusha, kadib markii ay ka adkaatay Crystal Palace… + SAWIRRO
(London) 19 Oct 2019. Manchester City ayaa ugu dambeyntii ku soo laabatay wadada guusha, kadib markii ay kaga adkaatay Crystal Palace 0-2, kulankooda 9-aad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2019/2020.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-2 ay ku hogaamineysay kooxda martida aheyd ee Manchester City.
Daqiiqadii 39-aad Gabriel Jesus ayaa hogaanka u dhiibay Manchester City wuxuuna dheesha ka dhigay 0-1, waxaana goolkan caawiyay xiddiga reer Portugal ee Bernardo Silva.
Markale daqiiqadii 41-aad Manchester City ayaa la timid goolkeedii 2-aad waxaana ciyaarta 0-2 ka dhigay David Silva, iyadoo uu goolkan ka caawiyay Raheem Sterling.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada dhinacba waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican, iyagoo abuuray fursado badan oo halis ah ee goolal loo filan karay laakiin ugu dambeyntii kama aysan faa’ideysanin.
Ugu dambeyntii kooxda uu hogaamiyo Pep Guardiola ee Manchester City ayaa markale dib ugu soo laabatay wadada guusha, kaddib markii ay 0-2 kaga soo adkaadeen naadiba Crystal Palace oo ay ku booqdeen garoonkooda Selhurst Park.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Mallorca Iyo Real Madrid ee horyaalka La Liga
Juventus oo saddexa dhibcood kaga gaartay Bologna garoonkeeda Allianz, xilli Ronaldo uu shabaqa gaaray… + SAWIRRO